“Waxaan ahay ninka la Dagaalama Argagixisada iyo nabad-diidka Ee Guryahooda Ugu Dhaca” | Somaliland.Org
“Waxaan ahay ninka la Dagaalama Argagixisada iyo nabad-diidka Ee Guryahooda Ugu Dhaca”
January 14, 2013	“Dadka I Eedaynayaa way I Hafrayaan, waana dad wax ka khaldan yihiin” Badhasaabka Sool
Hargeysa (Somaliland.Org)- Badhasaabka Gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali (Jeeni-yare) ayaa ka waramay xaalada guud ee gobolka oo uu ku dooday inuu ku yaalo bogcad xuduud ah oo ay ku xeeran yihiin cadow badan.
waxaanu ku dheeraaday guddoomiyuhu xaalada nabadgelyo, isagoo tilmaamay inay u dhexeeyaan goobo ay ka jiraan arrimo iyo xuduud.
Waxa kale oo uu Badhasaabku ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Laascaanood oo dhawaan eedaymo ujeediyay, waxaanu sheegay inaanay eedahaas waxba ka jirin, isla markaana ay hafrayaan dadka eedaha u jeedinayaa.
Badhasaabka oo xalay khadka telefoonka ugu waramay Wargeyska Dawan isagoo ku sugan magaaladda Hargeysa oo uu socdaal shaqo ku joogo, waxa uu hadalkiisa ku bilaabay, isagoo ka hadlaya xaalada ammaanka gobolka. “Gobolka Sool xaaladiisa nabadgelyo way wanaagsan tahay, maamulka gobolka, ciidamada ammaankuna si wanaagsan ayay u shaqaynayaan. Gobolku wuxuu ku yaalaa Puntland ayaanu xuduud la leenahay, waxa iyana jira koox budhcad ah oo Khaatumo la yidhaahdo, waxa kale oo nagu soo duushay Al-shabaab iyo argagixiso, dembiileyaashooduna waxay nooga buuxaan xabsiyada oo sharciga ayaa la marinayaa, waxaan ku dedaalaa in kooxaha cadawga ku ah qarannimada Somaliland aanu la tacaalno oo aanay u soo gudbin dalka intiisa kale.”
Badhasaabka oo aanu waydiinay sida uu u arko xildhibaano ku eedeeyay inuu sii daayo dembiileyaasha falalka amaan-daro fuliya, waxa uu ku jawaabay.
“Eedaha la ii soo jeediyay waa qaar aanay waxba ka jirin oo la igu hafray. Aniga oo aan is-faaninayn waxaan ahay ninka la dagaalama kooxaha argagixisada ah iyo nabad-diidka ee guryahooda ugu dhaca. Dadkan I eedaynayaana waa dad khalad fahamsan.”
Sidoo kale, badhasaabka Gobolka Sool Mr. Jeeni-yare waxa uu baaq u diray shacabka ku dhaqan guud ahaan gobolka Sool, waxaanu yidhi. “Waxaan bulshada gobolka Sool ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada oo ay soo sheegaan cidii nabadgelyada wax yeelaysa. Anaguna waxaanu nidar ku marnay inaanu la dagaalano oo aanaan u jixjixin.”
Badhasaabku wuxuu sheegay inay gobolka Sool deegaamo ka mid ah ay ka jiraan biyo la’aan abaaro, waxaanu xukuumadda iyo hay’adaha caalamiga ah u soo jeediyay inay gargaar gaadhsiiyaan dadka abaaruhu tabaaleeyeen.
Previous PostSirdoonka Soomaaliya Oo Sheegay In Sarkaalkii Faransiiska ahaa ee u af-duubnaa Al-shabaab uu dhintayNext PostXawaaladda Jubbo Express Ka Fac weyn Mid Lagu Xidhiidhiyo Qaran Express	Blog